» बागमती प्रदेश सरकारले प्रयोगशाला स्थापना गर्न अनुदान दिने
२०७८ कार्तिक १,सोमबार १६:५९
बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, हेटौंडा । तस्बिरः तु खबर ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशमा प्रयोगशाला स्थापना गर्नको लागि सामुदायिक विद्यालयलाई अनुदान रकम दिने भएको छ । शिक्षा विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेशले सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्नका लागि १२ देखि १५ लाख रुपैयाँ सम्म अनुदान दिने भएको हो ।
शिक्षा विकास निर्देशनालयले ‘सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान, विषयगत र सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ अनुसार छनोट भएका विद्यालयलाई प्रति विद्यालय रु. १५ लाख, र विज्ञान, विषयगत प्रयोगशाला स्थापना गर्न बढीमा रु. १२ लाख अनुदान दिने भएको हो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा उल्लेख गरेको शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतको सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान, विषयगत र सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गरेको थियो । सोही कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि निर्देशनालयले कार्यविधि तयार गरी अनुदान दिने जनाएको छ ।
सरकारले अनुदान आवेदनको लागि विभिन्न सर्त समेत अघि सारेको छ । प्रयोगशाला स्थापना गर्ने विद्यालय माध्यमिक तहसम्म सञ्चालित हुनुपर्ने, विद्यालयमा विद्युत पुगेको र जडान गरेको हुनुपर्ने छ । विद्यालयले विज्ञान, विषयगत र सूचना प्रविधि प्रगोगशाला मध्ये जुन विषयमा आवेदन दिने हो ।
उक्त विषयको प्रयोगशाला स्थापना गर्न यस भन्दा अगाडि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बजेट उपलब्ध नगराइएको भनी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय समेत आवेदनमा संलग्न हुनुपर्नेछ । विद्यालयको संरचना, विद्यार्थी संख्या, छात्रा भर्नादर, भौगोलिक क्षेत्र, विगत तीन वर्षको एसईईको नतिजा लगायत कार्यविधिले तोकेको सूचकको आधारमा विद्यालय छनोट गरिने निर्देशनालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय क्रिकेट : बागमती प्रदेश विजयी
गणतन्त्र र संघीयता माओवादीको एजेण्डा : मन्त्री जम्मकट्टेल
जन्मदिनमा विद्यालयमा अक्षयकोष
एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै
यस्तो रहने छ आजको मौसम पूर्वानुमान